Midedaka… | NewsMada
Gasy mazava tsara, tena ao anaty rakibolana ny hoe “midedaka”. Ny dikany dia hoe mipingapinga te hisehoseho, te hoderaina… Iza no midedaka ? Iza indray fa tsy ity fitondrana ity, indrindra ny ao amin’ny Fiadidiana ny Repoblika ao, raha nandray ireo mpilalaon’ny Barea, teny amin’ny Lapan’Ambohitsorohitra, afakomaly. Efa nampoizin’ny rehetra rahateo izany, fa tsy maintsy hisy indray izao ny hisehoseho sy hidedadedaka, taorian’ireny fandresena lehibe azon’ny ekipam-pirenena farany teo ireny. 100 tapitrisa Ar no natolotra ny ekipa, ho fisaorana sy fankaherezana, hono.
Hita taratra eny ihany anefa fa fanararaotana hisehoseho no betsaka sy ao ambadika. “Karavato” manga no nameno ny trano lehibe nandraisana ireo mpilalao. “Mangamanga ny loko e! “, hoy ilay hira manakoako amin’izao fampielezan-kevitra izao. Saiky tao daholo ry “bonshommes” isany. Hita sy tsapan’ny rehetra ihany anefa izany. Ny olona koa izao tsy kentrina, na azo ampiesonina.
Niraradraraka ny fanehoan-kevitra manakiana, any anaty tranonkalam-pifandraisana any, vokatr’izany. Misy no tena mivantana, tsy mihambahamba, toy ny hoe “aza ampidirana resaka politika ny baolina kitra fa maharikoriko azafady”. “Izany angaha no betsaka any ?”, hoy ny sasany, sns. Eo, tsy hita izay tena asa mivaingana, izay tena politika mazava amin’ny fampandrosoana ny tanora sy ny fanatanjahantena. Rehefa misy vokatra tsara anefa, izao mijapy lamasinina, midedadedaka izao hatrany no atao.